Ny 5 karazana karazana Powder tsara indrindra - Shangke simika
Ny 5 Karazan-tsakafo Protein XNUMX tsara indrindra
Inona no proteinina
Ny proteinina dia hita manerana ny vatana - amin'ny hozatra, taolana, hoditra, volo, ary saika misy faritra na vatana rehetra. Izy io dia mandrafitra ireo angovo izay manome hery akora simika maro sy hemôglôbin izay mitondra oxygen ao amin'ny ranao. Ny proteinina farafahakeliny 10,000 hafa dia mahatonga anao ho toy ny inona ary mitandrina anao amin'izany fomba izany.
Ny proteinina dia manome angovo ary manohana ny fihetseham-po sy ny fihetseham-ponao. Izy io dia otrikaina tena ilaina amin'ny fananganana, fitazonana ary fanamboarana ireo sela, sel, ary taova manerana ny vatana.
Inona avy no atao hoe Powder Protein?
Ny vovony proteinina dia loharano proteinina avy amin'ny sakafo biby na zavamaniry, toy ny ronono, atody, vary na voanjo. Ny vovony proteinina dia avy amin'ny loharano isan-karazany ary azo alaina amin'ny endrika maromaro. Ampiasain'ny olona izy ireo hampitombo ny hozatra, manatsara ny fitambaran'ny vatana ary manampy amin'ny zavatra ilaina amin'ny proteinina.
Iza amin'ireo karazan-diloilo proteinina iza no tsara indrindra?
Misy karazany maro karazana safidy fanaovana vovobony misy proteinina ao anatiny, mahatsiaro tena mandreraka indraindray. Ity ambany ity no loharano 5 tena tsara indrindra amin'ny vovony proteinina.
Alpha-lactalbumin dia proteinina whey voajanahary misy votoaty voajanahary avo lenta amin'ny asidra amine sy amino branched-chain rehetra (BCAA), ka mahatonga azy io ho loharano proteinina tokana. Ny asidra amina lehibe indrindra ao amin'ny alpha-lactalbumin dia tryptophan sy cysteine, miaraka amin'ny BCAA; leucine, isoleucine sy valine.
Beta-Lactoglobulin (ß-lactoglobulin, BLG) no proteinina whey lehibe ao amin'ny rononon-tsakafo ary hita ao amin'ny rononon'ny biby hafa, fa tsy hita amin'ny ronon'olombelona. Beta-lactoglobulin dia proteinina lipocalin, ary afaka mamehy molekiola hydrofobika maro, manome soso-kevitra amin'ny fitaterana azy ireo. β-lactoglobulin dia naseho ihany koa fa afaka mamehy vy amin'ny siderophores ary noho izany dia mety hanana anjara toerana amin'ny ady amin'ny pathogens. β-Lactoglobulin dia mamolavola karazan-javatra sy fiasa ara-tsakafo maro isan-karazany izay nahatonga an'io proteinina io ho fitaovana fanatanjahantena betsaka ho an'ny fangatahana sakafo sy biochemical marobe.
Lactoperoxidase dia angovo voajanahary hita ao amin'ny rononon'ireo biby mampinono, ary koa ny tsiranoka hafa ao amin'ny vatana toy ny ranomaso sy ny sira. Izy io dia misintona, maka oksizenina thiocyanate ions amin'ny fisian'ny hidrogen peroxide ho asidra hypothiocyanous. Ny asidra mivadika amin'ny ronono sy ny ion hypothiocyanate dia mihetsika amin'ny vondrona suphydryl mba tsy hampandehanana ny metabolika metabolika amin'ny bakteria. Izany dia manakana ny bakteria tsy hitombo sy hanitatra ny kalitao azo ekena amin'ny ronono.
Lactoperoxidase dia fantatra fa manana toetra antimicrobial sy antioxidant. Araka ny fikarohana navoaka tao amin'ny Journal of Applied Microbiology, dia manana fananana antibaktera izay mahasoa ho an'ny hoditra ary mety hamongotra ireo bakteria miteraka bakteria. Lactoperoxidase koa dia singa manan-danja amin'ny fitambaran-tsakafo ampiasaina hanakanana ny lalivay, holatra, otrikaretina ary bakteria tsy hitombo amin'ny makiazy sy vokatra hafa momba ny hatsarana.
Lactoperoxidase dia glycoprotein misy hetsika anti-mikroba, ampiasaina ho fitaovana fanamafisana hanampiana ny fanatsarana io fitoniana io sy ny fiainana-rakitra vokatra.
Immunoglobulin G (IgG) no isotype antibody be dia be indrindra ao amin'ny ra (plasma), mitahiry 70-75% ny immunoglobuline olombelona (antibodi). Ny IgG dia manala ireo zava-mahadomelina manimba ary manan-danja amin'ny fankatoavana ireo antigène antigen-antibody avy amin'ny leukocytes sy makrofag. Ny IgG dia afindra amin'ny foetus amin'ny alàlan'ny plasenta ary hiaro ny zaza mandra-piasan'ny hery fanefitra azy.
Ny immunoglobulin dia afaka mamatotra amin'ny microorganismes sy ny poizina misy pathogen hamoronana antibody, izay mety hanatsara ny hery fiarovana ny rafitry ny olon-dehibe.
Lactoferrin dia proteinina hita ao anaty ronono avy amin'ny olona sy omby. Hita ao anaty ranon-tsavony maro hafa ao amin'ny vatana toy ny ranoka, ny ranomaso, ny mucus ary ny baony. Lactoferrin dia hita ao amin'ny colostrum ambony indrindra, ny karazana ronon-dreny voalohany vokarina aorian'ny nahaterahan'ny zaza iray. Ny anjara asan'ny Lactoferrin ao amin'ny vatana dia ny famatorana sy ny fandefasana vy. Izy koa dia manampy hiady amin'ny otrikaretina.
Lactoferrin dia zava-dehibe amin'ny fitomboan'ny fiasa fiarovana amin'ny zazakely mpampinono zaza. Manome hetsika fanoherana ny bakteria sy fanohanana ny zaza amina zaza. LF dia singa iray amin'ny rafi-kery fanefitra tompon'andraikitra amin'ny fiarovana amin'ny haavon'ny mucosal, noho ny hetsika antimikroba avo lenta.
Lactoferrin sy ny fanampin-tsakafo lactoferrin dia nodinihina be. Ny olona sasany dia mandray menaka lactoferrin hahazoana tombony antioxidant sy anti-inflammatory.
Amin'ny fambolena indostrialy, ny vovony lactoferrin dia ampiasaina hamonoana ny bakteria mandritra ny fanodinana hena.
Markus C, Olivier B, Panhuysen G, et al. Ny proteinina bovine alpha-lactalbumin dia mampitombo ny tahan'ny plasma tryptophan mankany amin'ny asidra amino tsy miandalana hafa, ary amin'ireo lohahevitra marefo dia manangana ny hetsika serotonin ao amin'ny atidoha, mampihena ny fitrandrahana kortisol ary manatsara ny toe-tsaina eo ambanin'ny sorena. Am J Clin Nutr 2000; 71 (6): 1536-1544.
Ny fampifandraisana ny beta-lactoglobulin amin'ny retinol sy asidra matavy ary ny andraikiny ho toy ny fiasa biolojika mety ho an'io proteinina io: a Review.Pérez MD et al. J Dairy Sci. (1995)
Fanamboarana beta-lactoglobulin eo amin'ny velaran'ny poloney nanoparticle polistirena: fomba fanandramana sy fikajiana.Miriani M et al. Proteinina. (2014)
Ny fiovana ara-drafitra ao amin'ny beta-lactoglobulin beta-lactoglobulin emulsion dia misy fiantraikany amin'ny proteolisis sy ny immunoreactivity.Marengo M et al. Biochim Biophys Acta. (2016)
Hetsika antimicrobial an'ny oxidases roa sy lactoperoxidase.Sarr D et al. J Microbiol. (2018) Ny famonoana Lactoperoxidase amin'ny nanoparticle volafotsy dia manatsara ny asany antimicrobial.Sheikh IA et al. J Dairy Res. (2018)
Lactoperoxidase, proteinina amin'ny antimika mikotrika, toy ny mazoto mety hiteraka mpikatroka karsiniklikanika karsinogen amin'ny alàlan'ny homamiadana.Sheikh IA et al. Anticancer Res. (2017)
Ny immunocomplex izay misy lactoferrin dia manelanelana ny vokatra antitumor amin'ny fametrahana ny macrophage mifandray amin'ny fivontosana ho an'ny fôpôtôpika M1.Dong H, Yang Y, Gao C, Sun H, Wang H, Hong C, Wang J, Gong F, Gao XJ Immunother cancer. 2020 Mar
A bogine lactoferrin nalaina avy amin'ny peptide nitaona osteogenesis tamin'ny alàlan'ny fitsipiky ny fihanaky ny osteoblast sy ny fanavahana.Shi P, Fan F, Chen H, Xu Z, Cheng S, Lu W, Du MJ Dairy Sci. 2020 Mar 17
Lactoferrin's Anti-cancer Properties: Safety, Selectivity, and Wide Range of Action.Cutone A, Rosa L, Ianiro G, Lepanto MS, Bonaccorsi di Patti MC, Valenti P, Musci G.Biomolecules. 2020 Mar 15
Fitsapana momba ny fitsaboana an'i Lactoferrin ao amin'ny zaza vao teraka: fiantraikany amin'ny otrikaretina ary ny Gut Microbiome.Embleton ND, Berrington JE.Nestle Nutr Inst Workshop Ser. 2020 Mar 11